China Separation orinasa CSTR sy mpanamboatra | Boselan
Ny fisarahana tsy miankina CSTR, natao ho an'ny orinasam-pamokarana biogas kely sy salantsalany ary tetik'asa fampivoarana maharitra ny toeram-pambolena. Ny fisarahana ny tompon-trano sy ny tankierobika dia manamora ny fitantanana sy ny fitehirizana ny entona, ary koa ny fikojakojana ny fitaovana.Ferana orinasa sy toeram-pambolena miaraka amina famokarana gazy lehibe dia afaka mitahiry ny entona ny tompona entona misaraka tsy manimba fako. Izy io dia afaka mamatsy hafanana, famokarana herinaratra sy mahandro. Raha atambatra amin'ny famokarana herinaratra, dia afaka mahatsapa tanteraka ny rafitra ara-toekarena tontolo iainana.
Previous: Fampidirana CSTR
Manaraka: Ny fampidirana vondrona CSTR